TSY FANDRIAMPAHALEMANA : Dahalo mahery vaika telo lavon’ny balan’ny zandary – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:01
-	Mitohy hatrany ny fanazarantena ataon’ny zandary iatrehana ireo dahalo any Fianarantsoa.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/TSY FANDRIAMPAHALEMANA : Dahalo mahery vaika telo lavon’ny balan’ny zandary
Nahafatesana dahalo raindahiny telo ikoizana tao amin’ny distrikan’Ankazobe sy tany amin’ny distrikan’Ikalamavony, nandritra ny fifandonana tamin’ny Zandary. Dahalo nampitondra faisana teny anivon’ny fiarahamonina avokoa izy ireo. Mbola nahazoana basy mahery vaika koa tany amin’ireo olon-dratsy. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 23 septembre 2020
Anisan’ny basy tratra tany amin’ireo dahalo lavo.
Nitrangana fandrobana omby maromaro, tao amin’ny fokontany sy kaominina ambanivohitra Antakavana, anatin’ny distrikan’Ankazobe, ny 17 septambra 2020. Nisy, araka izany, ny fanarahan-dia nataon’ny fokonolona niaraka tamin’ny Zandary. Fantatra nandritra ny fanarahan-dia nataon’ireo fokonolona sy ny mpitandro filaminana fa isan’ireo nanao ny fanafihana i Bekotaba na i Ndrema, mipetraka ao amin’ny fokontany Ambohitsoa, Kaominina ambanivohitra Beronono, distrikan’Anjozorobe. Niezaka nanatratra ireo ny mpanara-dia. Nosamborina avy hatrany tao an-tranony io dahalo io, isan’ireo tompon’antoka tamin’ny fanafihana tany amin’ny distrikan’Ankazobe. Nandritra ny fisamborana azy no nahitana basy mahery vaika Mas 36 mitondra ny laharana : 19495 miaraka amin’ny bala miisa telo 7,5 mm. Nandritra ny fanadihadiana natao taminy no nilazany ny namany mpiray tsikombakomba azy antsoina hoe Lanja, izay mipetraka ao Andranomiady, Kaominina ambanivohitra Antakavana, anatin’ny distrikan’Ankazobe.
Nikasa hitsoaka… maty voatifitra
Tonga nizaha ny razan’ilay dahalo ny dokotera.
Nampandrenesina avy hatrany ny Zandary tao amin’ny Kaominina ambanivohitra Tsaramasoandro, izay toerana manamorona ny Kaominina ambanivohitra Antakavana. Nisy ny fandehanan’ny zandary sy ny mpanara-dia niaraka nitondra ity olon-dratsy ity ho any amin’ilay olona nolazainy ho isan’ny mpiray tsikombakomba azy. Teny an-dalana ho any amin’ilay toerana voalaza fa misy ilay namany, no nitady hevitra itsoahana i Bekotaba. Vokany, voatery tsy maintsy nampiasa ny basy teo am-pelatanany ny Zandary, ary naratra ilay dahalo nikasa hitsoaka. Vantany vao naheno izany ny Kaomandin’ny kaompanian’Ankazobe dia nandefa manamboninahitra iray hanao ny fikarohana sy hizaha ifotony ny zava-nisy momba ny fikarohana ireo dahalo nangalatr’omby ireo. Tiana ny mampahatsiahy fa isan’ireo dahalo mahery vaika sy atahoran’ny olona fatratra ary efa ikoizana any amin’ny faritra Ankazobe sy Anjozorobe iny i Bekotaba sy ny tariny.
Lavon’i bala koa i Bemainty sy ny zandriny…
– Mitohy hatrany ny fanazarantena ataon’ny zandary iatrehana ireo dahalo any Fianarantsoa.
Nahazo angom-baovao tamin’ny olona tsara sitrapo ny avy amin’ny zana-tobim-paritry ny zandary tao Andranomavo, anatin’ny kaominina ambanivohitra Ambatomainty, anatin’ny distrikan’Ikalamavony, ny 19 septambra lasa teo, tokony ho tamin’ny 3 ora sasany. Raha ny fampitam-baovao, dia voan’ny bala i Bemainty, izay izy sy ny namany ihany no nifampitifitra, vokatry ny tsy fanarahan-tsaina tamin’ny fizarana omby halatra nataon’izy ireo, tao Antsoro, fokontany Mahasoa, kaominina ambanivohitra Ambatomainty, niaraka tamin’ny dahalo miisa 11. Saika hitsabo ity lehibeny dahalo ity izy ireo tao amin’ny fokontany antsoina hoe Ivola, ao anatin’ny kaominina ambanivohitra Ambatomainty no tonga ny avy amin’ny Zandary hisambotra azy ireo, tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany, tamin’io andro io.
Vantany vao hitan’ireo andian-dahalo ireo ny zandary dia notsenain’izy ireo tamin’ny tifitra variraraka, tamin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Namaly bontana avy hatrany ny zandary ka raikitra avy hatrany ny fifampitifirana.Tsy naharesy tosika ny avy amin’ ny Zandary izy ireo ka vaky nandositra, afa-tsy ny zandriny antsoina hoe Namby kely no tsy niala teo fa nanohitra sy niaro ity rahalahiny, izay dahalo raindahiny. Vokany, samy maty lavon’ny balan’ny mpitandro filaminana avokoa izy roa lahy. Mbola sarona teny amin’izy ireo ny basy mahery vaika, fampiasan’izy ireo rehefa manafika. Miezaka manao ny ainy tsy ho zavatra ny Zandary any ifotony, mba hiarovana ny ain’ny vahoaka sy ny fananany. Vokatra lehibe ho an’ny fiarahamonina ny fahalavoan’ny dahalo raindahiny mampitondra faisan, mba hiverenan’ny fahalemana eny ifotony.
Firongatry ny asan-jiolahy : Misy mpitandro filaminana tafiditra amin’ny varotra basy sy bala
Miparitaka ny fitaovam-piadiana.
Araka ny fanadihadiana hatramin’izay, voatonontonona matetika ny mpitandro filaminana amin’ny asan-jiolahy na asan-dahalo, indrindra amin’ny famatsiana fitaovam-piadiana ireo olon-dratsy. Manaporofo izany hatrany ny fisian’ny mpitandro filaminana tratra amin’ny fivarotana fitaovam-piadiana, toy ity tany Antsiranana ity. Miaramilan’ny 2e RFI Antsiranana no voarohirohy amin’ny varotra balana Kalachnikov. Voalaza fa very tao an-dakazery tao amin’ny tobin’ny 2e RFI. Araka ny fanadihadiana savaranonando, tratra tao anatin’ny finday an’ity miaramila tratra ity, ny resaka nifanaovany tamin’ireo mpividy bala. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa bala 20 amin’ny 9 mm, amin’ny antsoina hoe : « lotissement sfi 73 » namidy 15.000 Ar ny iray. Efa nampahalalana ny lehiben’ny miaramila any an-toerana ity raharaha ity, ary mandeha ny fanadihadiana lalina. Toe-javatra tahaka izao amin’ny ankapobeny no mahatonga ny olon-dratsy manana fitaovam-piadiana mahery vaika, ary sahy mifanandrina amin’ny mpitandro filaminana mihitsy. Tsy mahahaga moa fa ireto farany, izay zatra ny lalan-dririnina ihany no mamatsy ny hamonoana ny mpitandro filaminana namany.
Sarotra ny ady amin’ny dahalo ambony latabatra
Ankoatra ireo tratra mivantana amin’ny asa ratsy, na amin’ny fanafihana izany, na amin’ny fivarotana fitaovam-piadiana, misy koa ireo dahalo ambony latabatra, izay anisan’ny maha sarotra ny ady amin’ireo olon-dratsy. Efa tambajotra mihitsy izy ireo ary ahitana hatrany amin’ny ambaratongam-pahefana ambany indrindra ka hatrany amin’ny ambony indrindra eto amin’ny Firenena. Anisan’ny fomba fiasan’ireo ny tsindry bokotra, ny teny midina, sns, izay ahitana manambonihitra ambony, mpitsara, ny mpanao politika indrindra indrindra. Efa nisy ny fitarainan’ny lehibena zandary tamin’ny kaominina iray tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony fa nisy dahalo tratran’izy ireo ka ora vitsy taorian’izay, niantso ny mpitsara iray nanome baiko, mba handefa maika ny raharaha any Fianarantsoa. Ohatra tamin’izany koa, olona iray nalaza tamin’ny fividianana omby halatra ary tratra ambodiomby nanondrana izany tany Ambohipanary Isorana. Nandeha ny tsindry ara-politika tamin’ny lehiben’ny Faritra iray tany an-toerana na teo aza ny fanoherana nataon’ny fiarahamonim-pirenena, mba hanjakany tany tan-dalàna. Nahazo fahahafahana vonjimaika ilay mpandraharaha ary tsy hita nanomboka teo.
Miady mafy ny mpitandro filaminana manoloana izany
Ahitan’ny Zandary eny ifotony vokatra ny fiaraha-miasa amin’ny fokonolona.
“Ampihorohoroana ny dahalo sy ny mpiray tsikombakomba aminy”, hoy ny SEG, ny Jly Ravalomanana Richard. Anisan’ny teny averiny matetika izany manoloana ny asan-jiolahy eto amintsika. Mazava raha io teniny io, fa tsy mifidy tavan’olona izy ireo, momba ny ady amin’ny tambajotran-jiolahy. Efa maro ny jiolahy na dahalo tratra sy maty. Tsy vitsy koa ireo mpitandro filaminana efa voasazy noho ny firaisana tsikombakomba amin’ny olon-dratsy. « Mahaleotena sy manana fahalalahana ny Zandarimaria amin’ny fanatanterahana ny asany », hoy hatrany ny SEG. Nanamafy izy fa tsy misy intsony ny tsimatimanota na antokom-panjakana na olom-boafidy na olom-boatendry na iza na iza, fa izay rehetra mandìka lalàna ka manohintohina ny tany tan-dalàna, ny filaminam-bahoaka, ny fandriampahalemana sy ny andrim-panjakana ary ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, dia malalaka ny Zandarimaria amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra, araka ny lalàna velona sy ny maha tany tan-dalàna an’i Madagasikara. Efa nisy mihitsy moa ny fifanazavana teo amin’ny minisitra, Jly Ravalomanana Richard sy ireo olom-boafidy teny amin’ny Antenimieram-pirenena, momba ny tsy fahafahana misambotra sy manenjika azy ireo, izay nanamafisana fa tsy misy ny tsimatimanota fa rehefa mandika lalàna tsy maintsy ampiharina aminy ny lalàna.
Ankazobe Ikalamavony tsy fandriampahalemana Zandarimariam-pirenena
Ady amin’ny hosoka sy fakàna an-keriny : Tafapetraka ny fitaovana vaovao fanontana « plaque châssis » amin’ny fiara
Fiatrehana ny covid-19 : Hosokafan’ny Fitondram-panjakana indray, ny CTC-19 Soamandrakizay
Tsy fisitrahana rano madio sy fidiovana: 11%-n’ny olona an-tanàn-dehibe no mbola manana olana